Tena ratsy ve ny miara-miasa amin'ny mpivarotra mpandraharaha?
Saika ny olona rehetra te hiasa mivantana amin'ny orinasa, avy amin'ny lehibe goavambe hatramin'ny mpivarotra kely, noho ny antony mahazatra: tapaka ny lehilahy antonony. Lasa paikady sy adihevitra iraisana ho an'ny B2C ny dokambarotra ny tombotsoany amin'ireo mpifaninana aminy efa nisy hatrany am-piandohana. Ny hoe midnety dia toa ny zavatra farany tianao ho fantatra ao amin'ny fifandraisan'ny orinasam-barotra. Nefa eritrereto izao: Tianao ve ny hitsambikina an'i Apple ary hividy mitovy ny iPhone "avy amin'ny Foxconn (raha azo atao)?" Probabaly tsy. Nahoana? Tsy lehilahy antenantenany fotsiny ve i Apple? Inona no mahasamihafa?
Amin'ny alàlan'ny famaritana ny teolojia "M2C" (Mpanamboatra ny mpanjifa), ny zava-drehetra eo anelanelan'ny mpanjifa sy orinasa iray dia heverina ho olo-meloka sy ratsy izay ataon'izy ireo manokana fotsiny mba hahazoana mivarotra anao amin'ny vidiny avo kokoa. aza manamboatra ny iPhone ho azo antoka.Efa manjavona Apple fa tsy olon-tsotra akory i Apple. Izy ireo dia mamolavola sy manome tsena ny vokatra, mampiasa vola amin'ny teknolojia sy ny sisa. Ny vidiny dia mirakitra ireo mety ho marika (ary mety ho) mety mihoatra noho ny vidin'ny entana nentin-drazana + laboratoire + ambony noho ny vola ambony. Apple dia manome sanda tsy manam-paharoa tokana amin'ny iPhone azonao, izay mihoatra lavitra noho ny metaly sy elektronika vitsivitsy fotsinyc circuit board. Ny fampidirana lanja dia fanalahidy manamarina ny hoe "middleman".
Raha mankany amin'ny teolojia marketing 4P mahazatra isika, mazava tsara fa ny P 3 ny "Position" na ny fanaterana ny varotra dia ampahany amin'ny sandany. Misy vidiny sy vidiny ampahafantarina ny mpanjifa ny misy sy ny lanjan'ny vokatra. Izany no ataon'ireo mpivarotra. Ao amin'ny orinasam-barotra mahazatra mahazatra antsika, manakarama izy ireo mba hanidy ny fifanarahana amin'ny alàlan'ny mety azy ireo amin'ny vokatra ilainao. Olon'ny olom-pirenena ve ilay varotra orinasa? Tsia, angamba tsy hisy hihevitra izany. Saingy, rehefa mahazo ny vaomiera avy amin'ny fifanarahana izay raisina amin'ny tombom-barotra na ny andaniny roa amin'ny fifanarahana ny mpivarotra, maninona ianao no tsy mihevitra azy ho "tsy ilaina"? Tianao tokoa ny asa mafy ataon'ny mpivarotra, ny fahalalany momba ilay foto-kevitra sy ny matihanina hamaha olana ho anao, ary ekenanao tsara fa rehefa manompo anao izy, dia tokony hamaly azy kokoa ny orinasany amin'ny asany tsara indrindra.
Ary mitohy ny tantara hatramin'izay. Izao dia manao tsara ny asan'ny mpivarotra ka nanapa-kevitra ny hanomboka ny orinasany izy ary niasa ho mpivarotra mahaleo tena. Mijanona ho mitovy amin'ny mpanjifany ny zava-drehetra, nefa lasa middleman tena izy izy ankehitriny. Tsy manana komisiona avy amin'ny lehibeny intsony izy. Fa kosa, nahazo tombony teo amin'ny tsy fitovian'ny vidiny teo amin'ny orinasa sy ny mpanjifa. Moa ve ianao, amin'ny maha-mpanjifa anao, hanomboka hahatsiaro ho tsy mahazo aina, na dia manome ny vidiny mitovy amin'ny vokatra mitovy izy ary angamba ny serivisy aza mety kokoa? Mamela ity fanontaniana ity amin'ny mpamaky aho.
Eny, maka endrika maro ny middlemen, ary tsy izy rehetra no manimba. Badk amin'ny raharaha talohan'ny nolazaikolahatsoratra feno habibiana, ilay lehilahy Japoney taloha dia tena nandray anjara tamin'ny fahombiazan'ny tetikasa. Fantany tsara ny takian'ny cusomer amin'ny farany.Alao ny toro-hevitra, mandinika tsara ny tsipiriany madinika rehetra, ary nampiroborobo ny fampodiana ny andaniny sy ny ankilany. Mety ho afaka hiaina tsy misy azy isika, mazava ho azy. Na izany aza, ny fananana azy eo afovoany dia mamonjy angovo sy risika be dia be. Toy izany koa ho an'ny mpanjifa farany, izay manana traikefa kely farafahakeliny miasa amin'ny mpamatsy iray avy any Sina. Nasehony azy ny lanjan'izy ireo ary nahazo ny fanajantsika izy ary mazava ho azy koa.
Inona no atao an'izay tantara an-tsehatra? Tsara ny resaka Middleman? Tsia, tsy izany ny tiako hambara. Fa aleoko esoriko io, fa tsy hanontaniako hoe zanaky ny mpamatsy ny mpamatsy anao na tsia, dia manontany ny hasiny. Ny ataony, ny fomba hahazoana valisoa, ny fahaizany sy ny anjara birikiny, sy ny sisa. Amin'ny maha-matihanina mahay dia afaka niara-niaina tamin'ny mpampivelona aho, nefa kosa ataovy azo antoka fa miasa mafy izy vao mahazo ny toerany. Ny mitazona olo-mahay mahay dia safidy tsara kokoa noho ny fananana mpiasa tsy manam-paharoa.